Fotoam-piraisam-be amin'ny namana 35
Nahoana ny bibilava no noheverin'ny olona samy hafa ?. Indraindray dia misy bibilava iray lazaina fa solontenan'ny faharatsiana, amin'ny fotoana hafa dia tandindon'ny fahendrena. Fa maninona no manana ny tahotra ny bibilava toy izany?
Ny fanabeazana sy ny fampiofanana dia misy ifandraisany amin'ny fomba fanaon'ny olombelona ny bibilava sy ny zavaboary hafa rehetra. Saingy tsy misy zavatra hafa ananan'ny lehilahy azy ankoatra ny fanabeazana izay mijanona ho an'ny ambiny. Ny bibilava iray dia mety hoheverina ho maloto sy ratsy na mariky ny fahendrena. Miankina amin'ny fomba fijery izay raisina izany. Ankoatry ny fandringanana ny valan-tanin'ny bibilava dia tsy fantatra fa manome ny tombontsoa manokana ho an'ny olona sy izao tontolo izao ny bibilava, na hoe mampiseho fahazarana mahafinaritra noho ny biby hafa izy ireo, na mampiseho soritr'aretina manan-danja kokoa noho ny hafa biby endrika. Mifanohitra amin'izany aza, marenina sy jamba indraindray izy ireo; mety hirehareha izy ireo satria handeha hiditra ao an-trano, tsy afaka hiaro tena na tsy ho tandindonin-doza, ary mahafaty ny moka amin'ny bibilava sasany mba hamoahana ny fahafatesana taoriana kelin'ny nahafaty ny olona iharan'izany. Saingy misy bibilava kely tsy dia mampidi-doza, ary ny hetsiky ny bibilava dia isan'ireo tsara indrindra sy haingana ny zavaboary rehetra.
Tsy misy na inona na inona ataon'ireo bibilava na tanjona tompoina izay manome antoka fa ny olombelona no hendry indrindra na ho mariky ny fahendrena. Saingy hatramin'ny fahagola vao niresaka voalohany ary ny soratra masina milaza azy io ho ny hendry indrindra amin'ny zavaboary rehetra ary nampiasa azy io ho tandindon'ny fahendrena.
Betsaka ny antony mahatonga ny menarana ho tena antsoina hoe mariky ny fahendrena. Ny tsara kokoa noho ny zavaboary hafa izay asehon'ny bibilava, dia mifandraika sy mifindra amin'ny herin'ny herinaratra an'izao rehetra izao, izay manome fahendrena ho an'ny olona, ​​rehefa ny olona dia manomana ny tenany handray azy. Amin'ny toe-piainan'ny olombelona ankehitriny dia tsy mendrika izy ary tsy afaka manao izany fahefana izany amin'ny alalany. Ny fikambanan'ilay bibilava dia natao mba ahafahana mihetsika mivantana an'ity herinaratra herinaratra ity. Ny hery anefa tsy manome fahendrena ny menarana; dia miasa amin'ny vatan'ny bibilava ihany izany. Ilaina ny mahatsapa sy hampiasa ny fahendrena. Tsy io bibilava io dia tsy. Ny bibilava no manana biby biby miorina tsara sy ara-toekarena indrindra. Ny tsanganana amin'ny hazondamosina dia mihazakazaka manerana ilay bibilava, ary io no tsanganana amin'ny hazondamosina izay iasan'ny herinaratra. Ny tsanganana amin'ny hazondamosin'ny lehilahy dia amin'ny endrika bibilava, fa ny hazondamosina amin'ny olona dia tsy hamela ny herin'ny herinaratra hikotrika mivantana amin'ny alàlan'ny alàlan'ny fijanonana ankehitriny avy amin'ny tsanganana amin'ny hazondamosina amin'ny alàlan'izao fotoana izao izay ampiasain'ny vanin-taonan'ny nerveo ny vatana manetsika avy amin'ny tadin'ny hazondamosina dia apetraka. Ny fandaharana ny nerve sy ny fampiasana ny fantsom-pitondran-tena dia manakana ny herin'ny herinaratra iraisan'ny rehetra fa tsy mihetsika mivantana amin'ny vatana sy manazava ny sain'ny olona. Ao amin'ny faritra amin'ny kibony sy ny valahany amin'ny vatana dia mitambatra ireo nerve, toy ny bibilava. Ireo goavam-be ireto dia manome ny herin'ny mpamokatra amin'ny herin'ny asany. Voalaza ao amin'ireo boky tatsinanana fa ny kundalini, ny herin'ny menarana, dia rakotra anaty vatana ary matory; fa rehefa rehefa mifoha ny herin 'ny menarana dia hanazava ny sain'olombelona izany. Raha adika, izany dia midika fa ny aretin-kozatra sasany amin'ny vatana, izay tsy nampiasaina na nampiasaina ankehitriny, dia tsy maintsy antsoina amin'ny asany manokana. izany hoe, hovahana izy ireo ary mifandray amin'ny tadin'ny tadin'ny hazondamosina. Ny fanaovana izany dia toa ny fitodihan'ny lakile amin'ny bokotra elektrika izay mitodika ny ankehitriny ary manomboka ny milina. Rehefa misokatra ny tohiny ary mifandraika amin'ny tadidin'ny hazondamosina eo amin'ny vatan'ny olona dia mihodina ny herinaratra. Ity voalohany ity dia mandeha amin'ny alàlan'ny vatan'ny vatana. Raha tsy matanjaka ny rafi-pitondran-tena eo amin'ny vatana ary mifanentana amin'ny haratony ankehitriny. Raha ny filazan'ny tsy mpikaroka dia hahatonga ny vatana tsy ho voan'ny aretina, tsy mahay mandanjalanja, hamokatra hadalana na hahatonga fahafatesana. Raha mifanentana amin'ny hery ny rafitry ny rafi-pitatitra dia manome hery ny vatana endrika astral ary manazava sy manazava ny saina, ka saika eo no ho eo ny saina hahafantatra momba ny lohahevitra momba ny tontolo ara-batana na ny tontolon'ny astral. Io hery io dia manana hetsiky ny bibilava ary miasa amin'ny alàlan'ny tadin'ny hazondamosina, izay endrika endrika bibilava. Tahaka ny bibilava, ny heriny dia hiteraka mamonjy izay miteraka nefa tsy mahafehy azy. Tahaka ny bibilava, ny hery dia mamorona vatana vaovao ary mampidina ny taloha rehefa mihaitra ny hodiny ny menarana.
Ny olona dia manana tahotra ny biby satria ny biby tsirairay eto amin'izao tontolo izao dia endrika miavaka sy faniriana manokana ao amin'ny olombelona, ​​ary ny biby izay atahoran'ny olona dia mampiseho azy ny endrika manokana amin'ny faniriany izay tsy azony hainy. Rehefa manjaka izy ary mahavita mifehy ny faniriany dia tsy hatahotra ny biby ny olona ary tsy hatahotra ny biby ary tsy hanisy ratsy olona. Matahotra ny bibilava iray ny olombelona satria tsy mahay ary tsy mahafehy ny hery ao anaty izay asehon'ny bibilava. Na dia ny menarana aza dia mahasarika ny olona na dia matahotra azy aza izy. Ny fiheverana fahendrena kosa manintona olona. Saingy tsy maintsy mandresy ny tahotra sy tia ny fahamarinana izy vao afaka mahazo fahendrena, fa raha tsy izany, toa ny hery toa ny menarana, dia handringana azy na hampahatezitra azy.
Misy fahamarinana ve ao amin'ireo tantara izay nandoroan'ireo Rosiana mpanamboatra ny jiro? Raha izany, ahoana no nataon'izy ireo, inona no tanjon'izy ireo, ary azony natao sy ampiasaina ankehitriny?
Tsy misy antony marim-pototra tokony nahatonga ny Rosicrucian na ny mpanao gazety hafa tsy tokony ho nanao jiro mandoro foana. Ny antony ilazantsika ny jiro mandrehitra ankehitriny dia angano noforonin'ireo mpankafy, dia noho ny fiheverantsika fa ny jiro dia tsy maintsy fanaterana misy zavatra tsy azo ihodivirana, toy ny wicks sy ny menaka, na amin'ny alàlan'ny entona mandrehitra azy no ampiasaina. , na amin'ny alàlan'ny alàlan'ny fandehanan'ny herinaratra ankehitriny ary manome hazavana amin'ny alàlan'ny tsy fahatomombanan'ny filamatra. Ny hevitry ny jiro dia ny hoe amin'ny alàlan'ny fahazavana no omena azy.
Ny jiro afrikana fanaon'ireo Rosicrucian dia heverina ho tsy mitombina satria heverintsika fa ny jiro dia tsy afaka manome hazavana raha tsy misy solika na zavatra omena azy. Noheverina fa ny jiro mirehitra foana dia iray amin'ireo heverina ho lehibe izay betsaka amin'ny fomba nentim-paharazana momba an'i Rosicrucian sy ny haino aman-jery.
Tsy afaka milaza isika hoe ahoana ny nanaovan'ny Rosicrucian na ny lehilahy sasany tamin'ny antenantenany ny jiro mirehitra foana, fa ny fotokevitra azo anazavana izany dia azo hazavaina. Aoka ho fantatra voalohany fa ny jiro mirehitra mandrakizay tsy mandany menaka na solika na fitaovana hafa ilaina amin'ny famatsiana amin'ny alàlan'ny mekanika. Ny vatana sy ny endriky ny jiro mirehitra foana dia mety ho fitaovana iray mifanaraka amin'ny fampiasana izay hametrahana ilay jiro hamolavola ny saina izay manaja sy manamboatra azy. Ny ampahany lehibe amin'ny jiro dia ny fitaovana manokana izay omena ny hazavana. Ny hazavana dia voatarika amin'ny hazavana eter na astral. Tsy vokarina amin'ny fomba fandoroana izany. Ny fitaovana izay ampiasaina hamokarana hazavana dia tokony omanina tsara sy amboarina na hifanaraka amin'ny hazavana eterika na astral. Ny fanomanana an'ity fitaovana ity sy ny fanodinana azy amin'ny hazavana eter na astral dia iray amin'ireo tsiambaratelon'ny Rosicrucianes sy ny Philosophers. Izany rehetra izany dia efa naseho tamin'ny alàlan'ny fahitana radiom. Toa manome hazavana i Radium nefa tsy mandany tena na mihena ny habetsahany. Radium dia tsy araka ny tokony ho izy no manome hazavana. Ny hazavana no voatazona ary afatotry ny radiasy. Ny hazavana izay toa alatsaka amin'ny alàlan'ny taratra dia avy amin'ny hazavana eter na astral. Ny radiom dia miasa ho toy ny haingam-pandeha ahafahana manazava ny hazavana avy amin'ny tontolon'ny astral ary miseho ho amin'ny saina ara-batana.
Ny fitaovana nampidirany ny jiron'ny jiro fanaon'ny Rosicrucian dia nalamina tamin'ny fitsipika mitovy, na dia afaka namboarina hafa aza izy io ary mety ho hafa noho ny taratra, satria misy endrika tsy hafa noho ny taratra. avy amin'ny tontolo eterika na astral dia mety hipoitra amin'ny tontolo ara-batana.
Ny jiro mirehitra foana dia azo inoana fa namboarina noho ny antony maro sy samy hafa. Ny jiro namboarina ho an'ny tanjona iray dia tsy azo napetraka amin'ny fitaovana rehetra izay nanaovana jiro mirehitra hatrany. Ohatra, ny radiom dia manome hazavana, fa ny radiom dia tsy ampiasaina ho an'ny hazavana satria tsy vitan'ny hoe manomana be loatra ny fanomanana azy io ho an'ny fampiasana toy izany, fa satria ny hazavana dia manimba ny vatan'ny biby.
Ireto misy vitsivitsy amin'ireto tanjona azo namboarina ireo jiro mirehitra: Mba hanome hazavana amin'ny fivoriana miafina; handinika sy hamotopototra ny tontolon'ny astral sy ny mpiara-miasa sasany; ny fanalavirana ny fitaoman-dratsy sy ny sampana manohitra ny asa izay nifindonan'ny iray na maromaro; hiarovana ny vatana ara-batana sy astral mandritra ny torimaso na mandritra ny fitaratra; ho fitaovana amin'ny fitsaboana ny metaly amin'ny fifindrana; ho fomba fanomanana tsotra sasantsasany amin'ny tanjona fitsaboana na amin'ny famoahana ozona; ny fanitsiana ny mason'ny vatana amin'ny eritreritra ara-batana na anatiny izay ahafahan'ny tontolon'ny fahitana tsy hita maso.
Ny jiro mirehitra hafa dia azo atao ankehitriny, fa na dia mety ho azo amin'ny ho avy aza dia tsy ilaina intsony ny hampiasana azy ireo ankehitriny. Nampiasaina ho an'ny fanao sy tanjona ara-tsaina na astral. Efa lasa ny fotoana hanaovana izany. Ny sain'olombelona dia tokony hitombo amin'ny fanao toy izany. Ny zavatra nofehezin'ny fika astrara dia mety ary tokony hofehezin'ny saina izao ary tsy misy fomba hafa ankoatra ny vatan'ny olona. Ny saina tokony ho fanazavana ho azy irery ihany. Ny vatany dia tokony ho jiro. Ny olombelona dia tokony hanomana ny vatany ary hitondra azy ho eo ambany fifehezan'ny saina fa hamirapiratra ao an-tsaina ny saina ary hanazava ny tontolo manodidina, ary hanao ilay lehilahy izay hita ho jiro mirehitra foana izay manazava hazavana mandritra ny fotoana rehetra.